MUSUQ-MAASUQ: HIIL & HAYB MA LEEYAHAY? - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Qormooyinka/MUSUQ-MAASUQ: HIIL & HAYB MA LEEYAHAY?
Dawlada Somaaliya 5 sano ka hor ma laheen habraac loo maro; Miisaaniyada, Dakhliga iyo Kharajka dawladda, mana jirin isla xisaabtan wixii soo gala iyo waxii baxa iyo cida mas’uul ka ah, shaqaalahana waxaa ugu nasiib badnaa qofkii jooga Wasaarada Maaliyada, Dekedaha iyo Airporada, mana jirin Hanti-dhawre, Xisaabiye, Xeer-ilaaliye iyo Garsoore ka hadla Musuq!
Barlamaanka Fedaraalka, Bangiga Adduunka iyo Hay’ada lacagta ma aqoonin qaab ay ku ogaadaan ama kula xisaabtamaan Laamaha Fulinta dhaqaalaha soo gala iyo qaabka ay ku bixiyaan!
Sidoo kale lama aqoon Hantida Guurtida iyo ma Guurtida ee Qaranku ku lahaa Caasimadda, Gobalada iyo Dibadda iyo cida bixisay ama haysata ama iibsatay! Daymihii lagu lahaa dawladda iyo middii laga qaatay, dawlado kale iyo dadkii ka qaatay daymaha Bangiyadii dalka 1990!
Dadaal dheer oo soo maray heerar kala duwan ayaa lasoo gaaray sanadkaan; in la bilaabo 30 sano kadib hirgelinta sharcigii XATOOYO XOOLO DADWEYNE IYO XISAABU XIL MALEH! Waxaana baaris iyo dacwad ku socotaa in ka badan 30 qof oo ka tirsan laamaha fulinta loona haysto Musuq hanti Qaran! Waxaana barbar socday xatooyada iyo dhaca hantida Qaranka ku takri fal Awooda iyo Magaca dawladda, Wasiir ilaa Askari iyaga oo fursad ka dhiganaya shaatiga 4.5 oo ka difaacaya la xisaabtan iyo sharci marin!
Kadib markii nagula qoray liiska dawladda ugu Musuqa badan Dunida, waxaa waajib ah in aan iswaydiino Su’aalahaan;
1. Haddii aanan bedelin aragtida iyo dhaqanka ah; in Musuqu yahay Raganimo, Xariifnimo, Farsamo iwm, yaa naga bedelaya Sumada Magaca xun ee noo baxay?
2. Haddii Shareecada Islaamku amartay qof xaday wax ka yar 500 doolar in laga jaro gacantiisa Midig oo ka qaalisan 50,000 doolar, diya ahaan, kana xaday xoolo hal qof! Maxay noqonaysaa ciqaabta iyo denbiga qofkii xada ama dhaca hanti ay leeyihiin 15 Milyan iyo kuwa soo socda ee laga xadayo ama laga khiyaamayo dhaxalkii loogu dhisi lahaa jidad iyo mashaariic ay berri ku noolaadaan?.
3. Waxaan maqlay qaar ka mid ah dadka loo haysto Musuqa oo ku maqan Xajka! Xajku xaaraan miyuu daahir ka dhigayaa?
4. Waxaan maqlay dad leh maxaa Musuqa yar loola dagaalamayaa, kan wayna loo daynayaa! Musuq miyaa leh yar iyo wayn?.
5. Waxaan aragnay dad leh maxaa Musuqa hebel iyo reer hebel laga raabaa! Musuq miyaa Hayb iyo Hiilo leh?.
6. Waxaan maqalnay Siyaasiyiin raba in ay berri madax ka noqdaan dalka oo difaacaya dad lagu haysto Musuq maamul iyo mid Hanti! Maxaa Musuqa loo Siyaasadaynayaa?.
7. Goormee aynu gaari doonaa in Musuqa loo arko Kansar ka daran Qarax iyo Shabaab! Lagana beri noqon-doonaa qofkii lagu sheego Musuq?.
8. Goormee loo wada aqoonsan-doonaa Musuqa Ceeb, Fadeexad iyo Bakhti-cune qofkii ku kaca, lagana takoori-doonaa bulshada, loona diidi-doonaa Xill iyo Guur danbe?.
Hadaba waxaa Ammaan iyo Bogaadin mudan talaabada loo qaaday dhanka isla xisaabtanka iyo furitaanka Galka baarista Musuqa Maamul iyo midka Hantiyeed iyo Hay’adaha dawlada ee bilaabay hawshaas, waxaana waajib ku ah muwaadin kasta ee Somaaliyeed oo Iimaan leh in uu taageero, gacana ka gaysto la dagaalanka Musuqa ragaadiyay dalka iyo dawladnimada.